‘सुन साइँली’को क्रेज ‘साँइली’मा पर्ला कि नपर्ला ? – An Online Entertainment News Portal
HomeNewsFeature News‘सुन साइँली’को क्रेज ‘साँइली’मा पर्ला कि नपर्ला ?
सुत्र इन्टरटेन्मेन्ट- सुन साइँली बोलको गीतले युटुबमा तहल्का मच्चायो, हराइसकेको हेमन्त रानाको क्रेज उठाइदियो । यो गीत यति हिट भैदियो कि, अभिनेता गौरव पहारी र अभिनेत्री मेनुका प्रधानले फिल्म खेलेर बनाउन नसकेको क्रेज एउटा म्यूजिक भिडियोबाट बनाए ।
गीत हिट भएपछि हेमन्त र गौरव यही कथालाई लम्ब्याएर फिल्म बनाउने सोचमा पुगे र जन्मियो फिल्म साँइली । साँइली सिनेमाको क्याप्टेनसिप रामबाबु गुरुङले सम्हालेका छन् । रामबाबु मौलिक कथामा फिल्म बनाउन सिपालु छन् ।
साँइली फिल्मको कथावस्तु ट्रेलर हेर्दा, विदेश जानुको पीडासँग जोडिएको छ । गौरव र मेनुकाको रोमान्स, बिहे र बिहेपछि उत्पन्न हुने समस्याले वैदेशिक रोजगारमा जानुपर्ने बाध्यतालाई फिल्मले उठान गरेको छ । यसैले त फिल्म साइँली प्रतिक्षित बनेको छ ।
यो फिल्मको गीतसंगीतले पनि राम्रै चर्चा बटुलेको छ । सिनेमा हलमा लागिसकेपछि सुन साँइली सुन साइँली बोलको गीतले पाएको जस्तो हाइप र चर्चा पाउँछ या पाउँदैन, हेर्न बाँकी छ । तर, फिल्मले व्यापार राम्रो गर्ने आशा गरिएको छ । फिल्ममा दयाहाङ राइको उपस्थिती पनि शक्तिशाली छ ।